IMac-kii ugu horreeyay ee xilligii Apple Silicon ayaa la bilaabi karaa bisha Maarso | Waxaan ka socdaa mac
Kani waa warar xan ah oo aan ku qaadaneyno "tweezers", laakiin haddii aan xisaabta ku darsanno in aan horeyba suuqa ugu haysannay Apple Silicon-kii ugu horreeyay ee qaab mini iyo MacBook ah, waxay macno samaynaysaa in kuwa soo socda ay yihiin iMac desktop.
Wararka xanta ah waxay soo jeedinayaan in la sii deyn doono bisha Maarso. Waxaan ka walwalayaa inay sidaa noqoto. Baaxadda Apple ee isku mid u ekaatay sannado badan waxay u baahan tahay dayactir degdeg ah oo la isku qurxiyo. Hadana haddii aad kor u qaaddo processor-ka cusub ee M1 dusha sare, waxay noqon kartaa horumar bahalnimo.
Waxaan suuqa ku haysanay seddex nooc oo Apple Silicon ah labo bilood gudahood, labo laptop, iyo Mac mini, marka 2021, waxaan u maleyneynaa mid cusub. Apple Silicon iMac. Dhammaan calaamadaha ayaa tilmaamaya, oo ay ku jiraan qoraal sir ah oo qarsoodi ah oo ka yimid caan bixiyaha caanka ah ee Apple oo u maleynaya inuu ku imaan doono dhowr bilood.
Un xasaasi ah ka soo qor L0vetodream waxay kicisay alaarmiga. Kaliya waxay sheegaysaa nambarka '3', oo ay weheliso fiidiyow gaaban oo muujinaya sida iMac uu ugu soo baxay kumbuyuutar dhan-ka-ah. Tirada ayaa soo jeedineysa bisha seddexaad ee sanadkan, oo ah Maarso, taasoo muujineysa in Apple ay soo bandhigi karto iMac cusub bishaas.
- 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) January 5, 2021
Kii ugu horreeyay ee ARM iMac
Kani wuxuu noqonayaa kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo Apple ah oo ka beddelaya processor-ka Intel una wareegaya processor-yadeeda cusub ee ku saleysan ARM Raadinta waxqabadka processor-ka hadda jira M1 Shirkadda, waxaan ka rajeyneynaa natiijooyin cajaa'ib leh mustaqbalka Apple Silicon iMacs cusub.
Oo ay weheliyaan processor-ka cusub ee M1, ayaa dib-u-cusbooneysi cusub laga filayaa pantalla ee iMac. Waxay si deg deg ah ugu baahan tahay naqshad cusub oo leh jajabyo yaryar oo la jaan qaadaya waqtiyada aan ku nool nahay. In kasta oo aan ka tagayo mid ka yara weyn oo ka sii hooseeya si aan ugu habboonaado tufaax caan ah oo qaniinsan, saddexda kale ee ku hareeraysan shaashadda waa in loo yareeyaa muujinta ugu yar.
Oo waxaa laga yaabaa in leh cabbir cusub oo ah 24 inches, ama kaabaya labada kale ee jira, ama bedelida midka yar ee 21,5-inch oo ka tagaya ARM iMac cusub oo leh 24 iyo 27-inji shaashadood. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhaqso leh shaki uga baxno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » IMac-kii ugu horreeyay ee xilligii Apple Silicon ayaa la bilaabi karaa bisha Maarso